Xog Buuxda oo laga helay Dowlada Itoobiya oo Saami ku yeelatay dekadda Dooraale – XAMAR POST
Xog Buuxda oo laga helay Dowlada Itoobiya oo Saami ku yeelatay dekadda Dooraale
Madaxweynaha Dalka Jabuuti iyo Ra’isalwasaaraha dalka Itoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ay dowladda Itoobiya saami ugu yeelaneyso dekadda Dooraale ee dalka Jabuuti.
Kulan labada hoggaamiye dhexmaray biloowgii todobaadkan ayaa waxyaabaha la isku afgartay waxaa ka mid ah in Itoobiya ay saami ku yeelato dekadda Dooraale sidoo kalena sharikadaah Ganacsiga Itoobiya ay maalgashi ku sameeyaan dekadda.
Wakaaladda Wararka Dalka Itoobiya ayaa baahisay in Abiye Axmed iyo Ismaciil Cumar Geelle ay wada saxiixdeen heshiiskaas iyada oo dowaldda Itoobiya ay dekaddaas u tahay halka ugu weyn ee ay adeegsaneyso.
Labo bilood ka hor dowladda Jabuuti ayaa baabi’isay heshiiskii ay kula jirtay SHraikadda DPWorld ee Imaaraadka,waxaana ay wali raadineysaa sharikado kale oo maamulka dekadda la wareega.
Sharikada reer Itoobiya ee la filayo in ay maalgashiga ku sameeyaan waxaa ka mid ah Sharikadda Isgaarsiinta ee Ethio-Telecom oo ka mid ah sharikada Afrika ee Ganacsiga tartan la’aanta ah ku heysta Itoobiya,waxaa kale oo ka mid ah sharikadda Xoogga Korontada Itoobiya.
Labada Madaxweyne ayaa waxaa ay Guddi heer wasiir ah u saareen dhameystirka heshiiskaas,waxaana la filayaa in Guddigaasi uu dhawaan kulmo islamarkaana la shaaciyo waxyaabaha lagu heshiiyay.
Itoobiya waxaa ay saami 19% ah ku leedahay Dekadda Berbera,halka Sharikadda gacanta ku heysa ee DPWorld ay leedahay 51%,inta soo hartayna waxaa leh Maamulka Somaliland.
Madaxa Xukuumadda Galmudug oo Xabsi Guri ka dhigay Odayaal iyo Xildhibaan ka Tirsan Galmudug